Kulan lugu horumariniyo afka soomaaliga oo magaaladda Göteborg lugu qabtay | Somaliska
MAGAALADDA GÖTEBORG, ee caasimadda labaad ee dalkaan Iswiidhan ayaa habeeninadii xalay aheyd waxaa lugu qabtay shir looga hadlayey horumarinta afka soomaaliga.
Shirkankan oo ahaa mid aay ka soo qeyb galeen aqoonyaho, waalidiin iyo carruuro soomaaliyeed oo xiiseeynayey afkooda hooyo, ayaa waxaa halkaasi lugu soo bandhigay barnaamij casri ah oo dhinaca digtaalka ah oo ah mid u fududeeynaya carruuraha in si sahlan ay ku baran karaan farta soomaaliga qoraalkiisa, dhaqanka taariikhda iyo dhulka soomaalida.
Kulankan ayaa waxaa marti ku ahaa Morgan Nilsson oo ka tirsan jaamacadda Göteborg oo ah u qaabilsan afka soomaaliga ee jaamacadda lugu dhigo. Wuxuu ka hadkay taariikhda afka soomaaliga qoristiisa halgalnkii loo galay qoristiisa.
Seesaar oo ah madaxa iyo urrurka Afkii hooyo ee soo qaban qaabiyey kalankii xalay ayaa mar uu la hadlayey Somaliska.com waxaa uu sheegay in haatan ay bilow fiican u tahay siddii uu gacan uga geeysan lahaa bad baadaa afka soomaaliga, islamarkaasina abuuray aalad internet-ka oo carruuraha si fudud ula jaan qaadi karaan kana baran karaan afkooda hooyo. Wuxuu ku soo bandhigay goobta bar intenet-ka ah oo ugu magac darry www.afkiihooyo.com bartaas oo ah bar uu ku soo bandhigayo barnaamijyadiisa uu ku doonayo inuu ku hormariyo afka soomaaliga. Ugu dambeyntiina waxaa carruuraha iyo waalidkii halkaasi yimid u sameeyey barnaamij tartan aqooneed la xirriirta xayawaanadda soomaalida iyo farta soomaaliga kaasoo oo si weeyn u soo jiitay.